မြန်မာဈေးကွက်တွင် Used Car Chevrolet trax 2019 ကားရောင်းရန်ရှိသည်။ ca777
အထူးကမ်းလှမ်း / ပွဲအစီအစဉ် / ကြေညာချက် ကားသုံးသပ်ချက်များ ကားစင်တာများ ဓါတ်ပုံပြခန်း ဆက်သွယ်ရန် လော့ဂ်အင် အကောင့်ဖွင့် အကောင့်မေ့နေတာလား
Anti-Lock Braking System သည် အရေးပေါ်ဘရိတ်နေစဉ် စတီယာရင်ထိန်းချုပ်မှုကိုခွင့်ပြုနှင့် ဘီးလည်ပတ်ခြင်း ကိုညှိသော။
Active Stability Control. Vehicle Stability Control (VSC) ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော၊ ၎င်းသည် ကားရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နှေးနှုန်းကနေအရှိန်မြှင့်စဉ် ကားချော်မှုများကိုလျှော့ချစေသည်။
Anti-theft system သည်ကားကိုအင်ဂျင်၊ စတီယာရင်ဘီးများ သို့မဟုတ်ဘီးများအားပိတ်ခြင်းဖြင့်ကားကိုခိုးယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
Cruise Control သည် ကားမောင်းသူသတ်မှတ်သောအရှိန်နှင့် ဆက်ထိန်းထားသဖြင့် ကားမောင်းသူသည်အရှိန်ထိန်းရန်မလိုပါ။
Electronic Brake Force Distribution သည် လမ်းအခြေအနေနှင့် ယာဉ်အမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်၍ ဘရိတ်ဖိအားကိုညှိပေးသော။
Fuel tank capacity သည် လောင်စာဆီသိုလှောင်နိုင်သောပမာဏဖြစ်သည်။
လောင်စာအမျိုးအစား၊ (ဖိအားပေးသဘာဝဓာတ်ငွေ့ (CNG)၊ လောင်စာဆီ၊ ဒီဇယ်စသည်) သည်ကားကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ပေးသော။
Grille သည် လေစီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုရန် ရှေ့မီးများအကြား ကားကိုယ်ထည်၏ရှေ့ပိုင်း။
Hill Start Assist Control သည် အထူးသဖြင့်တောင်ပေါ်တက်နေအရှိန်ပြုခင်စဉ် လိုအပ်သောဘရိတ်ဖိအားကိုသတ်မှတ်၏။
Hill Descent Control သည်ကားအရှိန်လျှော့ နှင့် ဘရိတ်ဖိအားကို 'anti lock braking system' နဲ့တွဲ၍ မောင်းသူထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ တောင်ပေါ်သို့ဆင်းကားချော်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Headlamps ကို Headlights ဟုလည်းခေါ်သည်။ ရှေ့ကားကိုယ်ထည်တွင် အလင်းရောင်ပေးသည့်ကိရိယာများ။
Paddle shifter သည်ဂီယာကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စတီယာရင်အနီး သို့မဟုတ် စတီယာရင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထား။
Park assist သည် အနီးအနားရှိအရာဝတ္ထုများကို ကားမောင်းသူအားသတိပေး ဘီးတွင်တပ်ဆင်ထားသေအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။
Power steering system ကိုလျှပ်စစ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်(hydraulic) ဖြင့် စတီယာရင် နှင့် လွယ်ကူစွာမောင်းနိုင်ချင်း။ လောင်စာဆီသက်သာမှုကို လျှပ်စစ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Engine PS သည် အင်ဂျင်တိုင်းတာခြင်း။ ၁ PS သည် ၁ horsepower အားညီမျှ။
ဘရိတ်ကိုနှိပ်နေစဉ် ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် ကားအင်ဂျင်ကို ပိတ်သို့ ဖွင့်သည်။
Restraint System သည်ခရီးသည် / ယာဉ်မောင်းများအတွက်ဒဏ်ရာကိုကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန်အတွက်လုံခြုံမှုပေးသည်။ Child Restraint System သည်အဓိကအားဖြင့်ကလေးများအတွက် ပြုလုပ်သောလုံခြုံရေးထိုင်ခုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
SRS airbags ,airbags
Secondary Restraint System airbags များသည် ကားများထဲမှာရှိသော ဒုတိယဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်လေအိတ်များ (ထိုင်ခုံခါးပတ်များအပြင်)။
'gearbox' ၏နောက်နာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကားအင်ဂျင်ပါဝါကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။
Vehicle Stability Control ကိုထို့အပြင် Electronic Stability Control (ESC) အဖြစ်လူသိမျာခြင်း။ ရုတ်တရက်လမ်းကွေးသောအလှည့်များ သို့ စတီယာရင်အမှားအချိန်တွင် မော်တော်ယာဉ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး အနေအထားကိုထိန်းသိမ်၏။
Chevrolet trax LT grade 2019 for sale in Myanmar
စျေးနှုန်း = 325 ကျပ်သိန်း
Lucky More Car Sale Center
56 07-Dec-2020 Id: ca777
1.4 Liters Engine
Auto transmission (gear)
ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ် / စင်တာ
အရစ်ကျ - ဝယ်ယူမှု
If you contact the seller, you can inform seller you know about this car from motorcarmyanmar
နာမည် = Lucky More Car Sale Center
ကားကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းများ= Lucky More Car Sale Center
ဖုန်းများ = 09254968566
Requests / Bids
အကျဉ်းသမိုင်း နှင့် အချက်အလက်
ကားထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီ အကျဉ်းသမိုင်း နှင့် အချက်အလက်
Chevrolet Myanmar together with 'Pacific Alpine Pte. Ltd'. (an exclusive Chevrolet cars importer and distributor) was formed in April 2013. Among those cars are Spark, Spin, Sail3, Cruze, Malibu, Trax,Trailblazer, Colorado, Tahoe and Suburban.
Pacific Alpine isajoint-partnership between Alpine Group Singapore and Pacific AA Group Myanmar. Alpine Motors (a subsidiary company of Alpine Group) isacurrent authorized Chevrolet's importer and distributor in Singapore, and Pacific AA Group isaleading pharmeceutical products and petro-chemical lubricants distributors in Myanmar.
Pacific Alpine is committed to building long term relationships by putting customers at the center of everything it does.
User Car Requests / Bids
sample...Maung Maung (မောင်မောင်)
Sample(နမူနာ)...I did not find Ford Ranger 2018 and Mitsubishi ASX 2017 used car from pri...
sample(နမူနာ)...I been looking for both these new cars, and have not found any. If you are...
( အရင် လောဂ့်အင် )
စာပို့မည် = Lucky More Car Sale Center
အထူးကမ်းလှမ်း / ပွဲအစီအစဉ် / ကြေညာချက်
ကုန်ပစ္စည်းကိုရှာမတွေ့ခဲ့လား။ Request/Bid it
motorcarmyanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခမဲ့အွန်လိုင်း ကားဆက်စပ်မှုကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
Contacts & Faqs
Disclaimer:We don't promote and are not responsible for misinformation ads posted by individual users (although we try to validate first ) and misconduct between sellers,buyers,rentors,and leasers.